आज पन्ध्रौं राष्ट्रिय धान दिवस मुलकभर मनाइन्दै (फाेटाे फिचरसहित)  BikashNews
आज पन्ध्रौं राष्ट्रिय धान दिवस मुलकभर मनाइन्दै (फाेटाे फिचरसहित)
२०७५ असार १५ गते १४:१९ विकासन्युज
काठमाडौं । असार १५ लाई विगतदेखिनै धान दिवसको रुपमा मनाइन्दै आएको छ । नेपालको परिवेशमा धानको विशेष महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले २०६१ देखि प्रत्येक वर्ष परम्परागत रुपमा उक्त दिनालाई धान रोपाई गरि दहि चिउरा खाने पर्वको रुपमा मनाइन्दै आएको हो ।
‘धानको उत्पादनमा बृद्धी, राष्ट्रको सम्वृद्धि’ भन्ने यस वर्ष धान दिवसको नारा सरकारले तय गरेको छ । सोही अवसरमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद(नार्क) अन्तर्गतको राष्ट्रिय बाली विज्ञान महाशाखाले समेत शुक्रबार धान दिवस रोपाई गर्दै मनाएको छ ।
कार्यक्रममा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जिसीले मुलुकको लगि धान धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक रुपमा नै महत्वपूर्ण रहेको बताए । जसरी धानको उत्पादन बढ्छ मुलुकुको जिडिपी अर्थत्रन्त्र पनि बढ्छ । उत्पादन घटे अर्धतन्त्र पनि घट्ने भएकोले समग्र देशको अर्थतन्त्रसँग धानको सोझै सम्बन्ध रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले अबको दुई वर्षमा धानमा आत्मनिर्भर उन्मुख पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको जानकारी गराए । धानको उत्पदान बढाउन धेरै विषयमा सुधारको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारी डाटामा जति भने पनि अहिले मुलुमा सिचाईको आवश्यकता मध्ये करिब २५ प्रतिशतमा मात्र सिचाई पुगेको छ,’ उनले भने ‘अझै पनि परम्परागत विउको प्रयोग भइरहेको छ, नयाँ प्रविधि प्रयोग बढाउन सकिएको छैन, पर्याप्त मात्रामा मलखाद्य छैन ।’ त्यसैले पनि धानको उत्पादन बढाउन सकिएको छैन ।
‘अहिले प्रतिहेक्टर धानको उत्पादकत्व ३.४ टन छ,’ उनले थपे ‘हामीले त्यसलाई बढाएर ३.७५ टन पुर्याउने लक्ष्य राखिरहँदा सुनसरीस्थित रानी जमरा कुलरीया सिंचाई लगायतले समेटिएको क्षेत्रमा ४ टनसम्म धान उत्पान भएको छ ।’
त्यसैले सबैभन्दा ठूलो समस्या धानको समस्याको रुपमा सिंचाई, मलखाद्य, प्रविधि रहेको उनको बुझाइ छ । त्यसलाई सुधारे चैते धानको उत्पादन समेत बढ्ने र समग्र उत्पादन बढे चामल मुलकबाहिरबाट आयात हुने अवस्था हट्ने उनको भनाइ छ । सोही अनुरुप सरकारले समेत विभिन्न कार्यक्रमरु अघि बढाएको उनले बताए ।
त्यस्तै कार्यक्रममा अन्तराष्ट्रिय धान अनुसन्धान प्रतिष्ठान (इरि)का प्रतिनिधि भवप्रसाद त्रिपाठीले कृषि क्षेत्रको विकासको लागि गएको ५० वर्षअघिदेखि कृषि मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्दै आएको बताए । केही दिन अघि मात्रै आगामी ५ वर्षको कार्ययोजनाको लागि मन्त्रालय र इरिबीच समझदारी भएको जानकारी गराए । उक्त समझादीमार्फत सरकारले राखेको धानको अत्मनिर्भरलाई सहयोग हुने उनको भनाइ छ ।
उनले कार्यक्रममा मुलुकको धानको उत्पादन बढ्न नसक्नुको कारणहरु औल्याएका थिए । त्यस्तै कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य दिलबहादुर गुरुङ, नार्कका कार्यकारी निर्देशक डा. वैद्यनाथ महत्तो, बाली तथा बागवानी नार्कका निर्देशक अनिसुर रहमान अन्सारी, कृषि प्रतिनिधि लगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
नेपालको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा करिब साढे १५ लाख हेक्टर भूभागमा धान खेती गरिएको छ । जसमा तराईमा ६८.५, पहाडमा २७.५ र उच्च पहाडमा ४ प्रतिशत क्षेत्रफलमा धान रोपिने गरिएको छ । पछिल्लो समय मुलुकमा ५२ लाख ३० हजार टन धान उत्पादन भएको कृषि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।